एक्कासी ४० प्रतिशत ले घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ! – Sandesh Press
एक्कासी ४० प्रतिशत ले घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो !
July 6, 2021 247
काठमाडौं । सडक सञ्जाल नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटेको छ तर मूल्य घट्दा पनि प्रतिसिलन्डिर आठ हजार रुपियाँ तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका तीनवटा गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि ४० प्रतिशत मूल्य घटेको हो । एउटा ग्यास सिलिन्डरको मूल्य आठ हजारमा झरेको स्थानीय जयदेवी शाहीले बताइन् ।
यसअघि सिमकोटमा मुगुको गमगढीबाट खच्चडमा बोकाएर ल्याएको ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १४ हजार थिया । करिब ४० प्रतिशत मूल्य घटेपछि ग्यास प्रयोग गर्न थालिएको उनले बताए । मूल्य घटेपछि हुम्लामा खाना पकाउने ग्यास प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा पनि बढेको छ ।
Prevपानी जमेको खाल्डोमा डुबेर पाँच वर्षीय बालकको मृत्यु
Nextबधाई छ !!! रमेश प्रसाईको जिन्दगीमा छोराको आगमन (सक्दो शेयर गर्नुहोस)
स्नेही काखकी आमा श्रीनेहा एक्कासी हस्पिटलमा
भुलेर पनि नर्गुहोस् यी ४ गल्ती, नत्र किड्निमा हुनसक्छ पत्थरीको समस्या !
विबाह गर्दै चर्चित नायिका आस्था राउत, विबाहको योजनाबारे पहिलो पटक यसरी खुलीन् आस्था